Masoivohon’ny OIF, Hervé Ladsous : Vonona hanampy an’i Madagasikara amin’ny fifidianana -
AccueilRaharaham-pirenenaMasoivohon’ny OIF, Hervé Ladsous : Vonona hanampy an’i Madagasikara amin’ny fifidianana
25/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Noraisin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ny masoivohon’ny OIF, Hervé Ladsous, ny 23 jolay lasa teo. Nandritra ny fihaonan’ny roa tonta, dia nanasongadina ny fitarihan’i Madagasikara ny fitantanana ny Frankofonia nandritra izay roa taona izay, fotoana izay nankatoavana ny sata mifehy ny fandaminana an’Antananarivo.
Nomarihan’ny masoivohon’ny OIF, Hervé Ladsous tamin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina ihany koa ny zavatra azon’ny OIF atao sy hanampiana an’i Madagasikara amin’ny fikarakarana ny fifidianana. « Efa maro ny hetsika nataonay, indrindra teo amin’ny lisi-pifidianana sy ireo asa hafa mbola eo am-panatanterahana. Ny OIF dia vonona hanampy an’i Madagasikara mba hampizotra tsara ny fifidianana », hoy hatrany, Hervé Ladsous, masoivohon’ny OIF.
Anisan’ny nitondra takaitra mafy nandritra ny fandalovan’ilay rivodoza Eliakim ny faritra avaratry ny nosy iny, maro noho izany ireo rava trano sy traboina vokatr’izany. Tsy niandry ela rahateo ny fitondram-panjakana izay notarihin’ny filoham-pirenena malagasy Hery ...Tohiny
British Petroleum:“HISY TETIKASA MARO HO AN’I MADAGASIKARA”